ကိုယ့်အိမ်ကနေထမင်းချိုင့်ကိုယ်စီယူလာပြီး အရေးတော်ပုံအတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ လူငယ်တချို့…. – Cele Oscar
ကိုယ့်အိမ်ကနေထမင်းချိုင့်ကိုယ်စီယူလာပြီး အရေးတော်ပုံအတွက် ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ လူငယ်တချို့….
ပြည်သူလူထု ကတော့ တစ်လ ကျော်ကြာသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒီအခြေအနေ ကို ရဲစွမ်း သတ္တိ အပြည့်နဲ့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေကြဆဲ ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ် တွေကလည်း ရှေ့ဆုံး ကနေ တက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်ပြီး နောက်တန်းက ပြည်သူတွေ ရဲ့ လုံခြုံရေး ကို ကာကွယ်ပေးနေ ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ တွေ အချင်းချင်းက တော့ ကိုယ့် ရဲ့ မိသားစုဝင် လိုမျိုးသတ်မှတ် ထားကြပြီး ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ပေးနေ ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် လည်း မြန်မာ ပြည်သူ ၊ ပြ ည်သားတွေရဲ့ ရိုင်းပင်း ကူညီချင်စိတ် က လေးစားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
လူထု လှုပ်ရှားမှု မှာ ပါဝင်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အဟာရ ပြည့်ဖို့ အတွက် အလှူရှင် တချို့က လည်း စားစရာတွေ ကို အလျှံပယ် လှူဒါန်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်း ထိလည်း တချို့နေရာ လေးတွေ မှာ စားစရာ တွေ လှူကြပေမယ့် အရမ်းဖြိုခွင်းတဲ့ နေရာတွေ မှာ တော့ ဘာမှလှူလို့မရတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တချို့ကတော့ မိမိတို့အိမ်ကနေ ထမင်းချိုင့် ထုတ်လာပြီး လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ မှာ အင်တိုက် အားတိုက် ပါဝင် လှုပ်ရှားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လည်း လူငယ်လေး တချို့က လမ်းပေါ် မှာ ပဲ ထမင်းချိုင့်လေးကို ဖွင့်ပြီး စားသောက် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့လည်ခင်း ခဏ နားကြတဲ့ အချိန်မှာ လမ်းဘေး မှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံး ဝိုင်းဖွဲ့ စားသောက်နေကြတဲ့ မြင်ကွင်းလေးက ရင်ထဲကို ထိမှန်စေပါတယ်။လူငယ် တွေရဲ့ စိတ်အား ထက်သန်မှု တွေကလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ပိုမို အားကောင်းလာပြီး ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက်ပါ ကြိုးစားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ် တွေက သူတို့ရဲ့ ဇွဲ ၊ လုံ့လ ၊ ဝီရိယတွေ နဲ့ အခက်အခဲ ပေါင်းစုံကို ကျော်ဖြတ် ကြပြီး ဖြစ်သလိုနေ ၊ ဖြစ်သလိုစားနေကြတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေက မျက်ရည် ကျရလောက်တဲ့ အထိကို ဝမ်းသာ ပီတိဖြစ်မိလို့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Source&Video Credit: myanmar load
ပွညျသူလူထု ကတော့ တဈလ ကြျောကွာသှားပွီ ဖွဈတဲ့ ဒီအခွအေနေ ကို ရဲစှမျး သတ်တိ အပွညျ့နဲ့ ဆကျလကျ ရငျဆိုငျနကွေဆဲ ပဲဖွဈပါတယျ။လူငယျ တှကေလညျး ရှဆေုံ့း ကနေ တကျတကျ ကွှကွှ ပါဝငျပွီး နောကျတနျးက ပွညျသူတှေ ရဲ့ လုံခွုံရေး ကို ကာကှယျပေးနေ ကွတာဖွဈပါတယျ။ပွညျသူ တှေ အခငျြးခငျြးက တော့ ကိုယျ့ ရဲ့ မိသားစုဝငျ လိုမြိုးသတျမှတျ ထားကွပွီး ကာကှယျ စောငျ့ရှောကျ ပေးနေ ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ လညျး မွနျမာ ပွညျသူ ၊ ပွ ညျသားတှရေဲ့ ရိုငျးပငျး ကူညီခငျြစိတျ က လေးစားဖို့ ကောငျးပါတယျ။
လူထု လှုပျရှားမှု မှာ ပါဝငျကွတဲ့ ပွညျသူတှေ အဟာရ ပွညျ့ဖို့ အတှကျ အလှူရှငျ တခြို့က လညျး စားစရာတှေ ကို အလြှံပယျ လှူဒါနျးကွတာ ဖွဈပါတယျ။အခုရကျပိုငျး ထိလညျး တခြို့နရော လေးတှေ မှာ စားစရာ တှေ လှူကွပမေယျ့ အရမျးဖွိုခှငျးတဲ့ နရောတှေ မှာ တော့ ဘာမှလှူလို့မရတဲ့ အခွအေနေ ဖွဈပါတယျ။လူငယျတခြို့ကတော့ မိမိတို့အိမျကနေ ထမငျးခြိုငျ့ ထုတျလာပွီး လူထု လှုပျရှားမှုတှေ မှာ အငျတိုကျ အားတိုကျ ပါဝငျ လှုပျရှားကွတာ ဖွဈပါတယျ။အခုဆိုရငျလညျး လူငယျလေး တခြို့က လမျးပျေါ မှာ ပဲ ထမငျးခြိုငျ့လေးကို ဖှငျ့ပွီး စားသောကျ နကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
နလေ့ညျခငျး ခဏ နားကွတဲ့ အခြိနျမှာ လမျးဘေး မှာပဲ သူငယျခငျြးတှေ အကုနျလုံး ဝိုငျးဖှဲ့ စားသောကျနကွေတဲ့ မွငျကှငျးလေးက ရငျထဲကို ထိမှနျစပေါတယျ။လူငယျ တှရေဲ့ စိတျအား ထကျသနျမှု တှကေလညျး တဈနထေ့ကျ တဈနပေို့မို အားကောငျးလာပွီး ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးတှေ အတှကျပါ ကွိုးစားပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။လူငယျ တှကေ သူတို့ရဲ့ ဇှဲ ၊ လုံ့လ ၊ ဝီရိယတှေ နဲ့ အခကျအခဲ ပေါငျးစုံကို ကြျောဖွတျ ကွပွီး ဖွဈသလိုနေ ၊ ဖွဈသလိုစားနကွေတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေ မကျြရညျ ကရြလောကျတဲ့ အထိကို ဝမျးသာ ပီတိဖွဈမိလို့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး ကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဇနီးသည် ကိုရင်ရင်ခွင်ထဲမှာ ဖက်ထားပေးဖို့ ပြောရင်းကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည် သူရဲကောင်းတစ်ဦး……